China Natural eco voajanahary landihazo canvas tote kitapo mini-kitapo lamba canvas fiantsenana misy logo Mpanamboatra sy mpamatsy | Zhihongda
Kitapo fividianana landihazo vita amin'ny lamba canco vita amin'ny lamba voajanahary voajanahary vita amin'ny lamba canvas misy kitapo
1.Color: izay loko azonao safidiana, 12 Oz Canvas Bag, habe amin'ny mpanjifaquest, ary habe mahazatra.
2. Fandefasana haingana 100% antoka sy serivisy ho an'ny mpanjifa tsara.
SAVITRA MIASA: Ny kitapo fiantsenana plastika sy taratasy dia tsy tsara ho an'ny tontolo iainana, sorohy ny fandaniam-poana ny taratasy sy harona plastika, ny safidy hendry indrindra dia ny kitapo fivarotana lamba rongony vita amin'ny lamba canvas azo ampiasaina.
ASA 3.HEAVY DUTY & DURABLE: kitapo tote dia 12 ounces amin'ny lamba, fanjairana mavesatra mavesatra manerana azy, Ireo kitapo ireo dia nohamafisina tamin'ny teboka fihenjanana, mahazaka lanja 30 kilao izy io.
4. Banga ho an'ny Tetikasa DIY: kitapo endrika bika madio sy tsotra mamela anao sy ny zanakao hamorona sary hosodoko sy sary ho azy manokana, hahatonga anao hanana kitapo manokana.
Tanjona 5.MULTI: Ny fampiasana an-tsokosoko an'ity kitapom-batsy manokana ity dia tsy vitan'ny kitapo fivarotana enta-madinika fa mety ho kitapo tote ho an'ny sekoly, kitapo amoron-dranomasina, kitapo tote gym, kitapo yoga, sns.
Anaran-javatra Kitapo fividianana landihazo vita amin'ny lamba canco vita amin'ny lamba voajanahary voajanahary vita amin'ny lamba canvas misy kitapo
Teo aloha: Kitapo miantsena vita amin'ny plastika azo ampiasaina azo tsapain-tanana ambongadiny, kitapo vita amin'ny lamba canvas voajanahary
Manaraka: Kitapo tote landihazo vita amin'ny lamba rongony vita amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny pirinty
Kitapo DIY Shopping bag 12o azo ampiasaina ho an'ny Craf ...